Ubuntu Update Reboot ချစရာမလို (Ksplice Uptrack) | Myanmar Blog
ကျွန်တော် Services ပေးနေတဲ့ Internet ဆိုင်တိုင်းကို Ubuntu ကိုသုံးပြီး Squid (Proxy/Cache), Apache (Local Web), DNS, Iptable (Fireware) ထိုင်ပါတယ်။
ခက်တာက Software/Driver/Kernel အသစ်ထွက်ရင် နေ့လည်ဘက်တွေ Upgrade မလုပ်ရဲပါဘူး။ Upgrade လုပ်ပြီးတာနဲ့ Restart တန်းတောင်းတော့တာကိုးဗျ။ ဆိုင်ထဲမှာသုံးနေတဲ့လူတွေ တို့လို့တန်းလန်းနဲ့ စိတ်ပျက်သွားမှာပေါ့။ Download လုပ်တော့ နှေး ပြီးတော့ Restart ချတော့ လိုင်းကကျ အကုန်ထပြန်ကုန်မယ်။ Upgrade လုပ်ပြီး Restart မချရင်လဲ နောက်မှ Restart ချ Reboot လုပ်ရင် Configuration တွေက မမှန်တော့ဘူး စက်ကကြောင်ချင်တယ်။ ဒါက Internet ဆိုင်ပဲရှိသေးတယ်။ World Wide Web မှာက Web Server တွေဆိုရင် … Upgrade မလုပ်ရင်လည်း Securoty Flow ကပေါက်နေမှာ။ Upgrade လုပ်ရင်လည်း အနည်းဆုံးတော့ နာရီဝက်လောက် Down မယ်။ လေယာဉ်လက်မှတ်ရောင်းတဲ့ Services ပေးထားတဲ့ Server လိုဟာမျိုးဆိုရင် သေပြီ။
တီလေးရေ အဆင်ပြေသွား….. B
ခုပုံအတိုင်းကတော့ ကမ္ဘာအနှံ့က linux server တွေ security update လုပ်ကြတော့မှာကြောင့် ဆိုက်တွေအတော်များများတော့ ခဏရပ်ကုန်ကြတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ တောက်လျှောက် run နေတဲ့ server လိုစက်တွေရဲ့ OS ကို update လုပ်ဖို့ဆိုတာ စက်ကိုခဏရပ်ပြီး restart လုပ်ဖို့ကတော့ သေချာပေါက်ပဲ မဟုတ်လား။
ကဲအခုတော့ အဆင်ပြေသွားပြီ။ http://www.ksplice.com ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ Ksplice Uptrack ဟာဆိုရင်ဖြင့် Reboot လုပ်စရာမလိုပဲ Upgrade / Install / Uninstall လုပ်နိုင်အောင် သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မယ်။
Uptrack Loading Progress
Uptrack Normal Status
Manual Download လုပ်ယူလိုပါက
apt အတွက် Source List ရယူလိုပါက
ရရှိတဲ့ Key ကို အသုံးပြုပြီး apt မှာသွင်းရန်
sudo အကောင့်ကို အသုံးပြုပါ။
aptitude install uptrack
Install လုပ်ပြီး Configuration ပြုပြင်ရန်
sudo gedit /etc/uptrack/uptrack.conf
sudo vi /etc/uptrack/uptrack.conf
အလိုအလျှောက် install ပြုလုပ်စေလိုပါက
Source List for uptrack
အသုံးပြုရန် Command များ
Install လုပ်ထားသော Software များအား Upgrade လုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။
Uninstall လုပ်လိုသော Software ကို ID နေရာတွင်အသုံးပြုပါ။ သွင်းထားသော Software အကုန် Uninstall လုပ်လိုပါက –all ကို အသုံးပြုပါရန်။
Installs ပြုလုပ်လိုသော Update ပြုလုပ်လိုသော Software ကို ID နေရာတွင်ထည့်သွင်းပါ။
လက်ရှ အသုံးပြုထားသော Software များ၏ Upgrade ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်မှုအခြေအနေကြည့်ရှုရန်။
~ by Ko Ko Ye` on September 3, 2009.
Tags: ksplice, Reboot, Ubuntu, Upgrade, Uptrack, WithoutReboot
One Response to “Ubuntu Update Reboot ချစရာမလို (Ksplice Uptrack)”
ကြည့်ကြည့်…. အကို ကတော့ညီ့တောင် ဒီပိုစ်လေးတင်ထားတာ သံချောင်းမခေါက်ဘူးနော်၊
ဘယ်ရမလဲ အကုန်ကူးတယ်… ငှဲငှဲငှဲ…
မောင်ဇော်မင်ေးအာင် said this on	September 7, 2009 at 11:34 am | Reply